မိတ်ကပ်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - တရုတ် မိတ်ကပ်ကိရိယာ လုပ်ငန်းရှင်များ
သိပ်သည်းသော အမွေးအမှင်များသည် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော၊ အလွန်ပျော့ပျောင်းပြီး အနံ့အသက်ကင်းသော ထိပ်တန်း synthetic fibers များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။တာရှည်ခံပြီး ကျွတ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ အလှကုန်များကို သင့်အသားအရေထဲသို့ ချောမွေ့စွာ ရောစပ်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
Concealer brush၊ blush brush၊ eye shadow brush၊ eyebrow brush၊ lip brush၊ foundation brush၊ angled contour brush စသည်တို့သည် သင့်မျက်နှာနှင့် မျက်လုံးမိတ်ကပ်အတွက် လိုအပ်ချက်များ အားလုံးနီးပါး ပြည့်မီပါသည်။
စုတ်တံအားလုံးသည် အလွန်နူးညံ့ပြီး ကိုင်ရလွယ်ကူသော မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ထားသော အမျိုးသမီးနှင့် ပုံမှန်မှ ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေရှိသူများနှင့် သင့်အား ယားယံစေမည်မဟုတ်ပါ။
ဤ 8 Pcs Makeup brush set သည် လူကြိုက်အများဆုံး လှပသောအရောင်ဖြင့် အလွန်အမိုက်စားဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်ကျကျဖြင့် သင့်မိတ်ကပ်စုစည်းမှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
စတင်အသုံးပြုသူနှင့် မိတ်ကပ်ပညာရှင် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် သင့်မိတ်ကပ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေမည့် အမျိုးအစားစုံလင်လှပါသည်။မေမေ၊ အမျိုးသမီး သူငယ်ချင်း၊ သမီး နဲ့ ချစ်သူအတွက် စံပြလက်ဆောင်။
10pcs ရေသူမမိတ်ကပ် Brush Set Eye Make Up Brushes
စုတ်တံများကို နိုင်လွန်အမွေးအမှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပျော့ပျောင်းသော်လည်း ပျော့ပျောင်းခြင်းမရှိ၊ သင့်အသားအရေကို မျက်ရည် သို့မဟုတ် ယားယံခြင်းမရှိစေပါ။အသားအရေ အမျိုးအစားအားလုံး၊ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေတွေတောင် သင့်တော်ပါတယ်။ဒီ brush set က ကြွေမသွားပါဘူး၊ မင်းရဲ့ သဘာဝအလှကို ပြသပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ အလှကို ပေါ်လွင်စေမှာပါ။
ထူးခြားသော ရေသူမလက်ကိုင်၊ လှပပြီး စတိုင်ကျသည်။ပုံသဏ္ဍာန်များသည် မချော်ဘဲ ကိုင်ရလွယ်ကူသည်။လည်ပတ်မှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး သန့်ရှင်းခြင်း။၎င်းတို့ကို ရေအေးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါသည်။စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် လွယ်ကူသော စုတ်တံများ။
မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ် 6pcs 3D ရေသူမမိတ်ကပ်လိမ်းဆေး အလှကုန် ဘရက်ရှ် Eyeshadow Eyeliner Blush Brushes
ULTRA SOFT BRISTLES- ဤမိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အစုံသည် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ ပျော့ပျောင်းသော နိုင်လွန်အမွေးအမှင်များနှင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျွတ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ အနံ့အသက်ဆိုးများကင်းစင်ကာ ကပ်ထားရလွယ်ကူသော အမှုန့်ဖြစ်သည်။
DURABLE- တောက်ပသော 3D ငါးစကေး ရေသူမ အမြီးပုံသဏ္ဍာန် လက်ကိုင်များကို ပရီမီယံ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး တာရှည်ခံသည့်အပြင် စတိုင်ကျသော ရုပ်ထွက်ရှိသည်။
စုဆောင်းမှု- ဤစုတ်တံ6ခုတွင် eye shadow brush ၊ eyebrow brush ၊ eyeliner brush ၊ lip brush စသည်တို့ပါ၀င်သည်၊ ထုတ်ကုန်လိမ်းရန်၊ အရိပ်ထိုးခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
မိတ်ကပ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်- ဤရေသူမလေး eye brush set သည် အရည်၊ အမှုန့် သို့မဟုတ် ခရင်မ် အလှကုန်များကို လိမ်းရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။အလွန်ပျော့ပျောင်းသော အမွေးအမှင်များသည် သင့်အား ချောမွေ့သော အထိအတွေ့ကို ပေးစွမ်းပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။
ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရည်အတွက် ဘေးကင်းသည်- ဤမိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များသည် သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူပြီး ခြောက်သွေ့လျှင်မြန်သည်၊ နေ့စဥ်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်အပလီကေးရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သည်။
အလှအပဆိုင်ရာ စုတ်တံများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သီးသန့်တံဆိပ် သစ်သားလက်ကိုင် 24pcs ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်
ဝါးလက်ကိုင်များပါသည့် ဓာတုအမွေးအမှင် ၂၄ ခု ပါရှိသည်။
ပါဝင်သည့် Brush များ- elite flat buffer၊ elite tapered powder၊ elite powder၊ elite angled blush၊ elite flat ဘက်စုံသုံး၊ elite foundation
အထက်တန်းစား အရိပ်ကြီးများ၊ အထက်တန်းစား ညွှန်ပြသော တိကျမှု၊ လက်ရွေးစင် doefoot Blender၊ elite fan၊ elite flat tip အရိပ်၊ အထက်တန်းစား အမိုးခုံးအရိပ်
Elite pointed Blender၊ elite blender၊ elite concealer၊ elite angled shadow၊ elite flat liner၊ elite brow
အထက်တန်းစားအသေးစိတ်အချက်ပြခြင်း၊ အထက်တန်းစားသေးငယ်သောအရိပ်၊ elite ကောင်းသောလိုင်း၊ elite ကုဒ်နံပါတ်၊ အထက်တန်းစားအသေးစိတ်အသေးစိတ်၊ elite ထောင့်ချိုးမျဉ်းကြောင်း
Processional အရည်အသွေးမြင့် 11pcs မိတ်ကပ် Brush Set အလှအပမိတ်ကပ်ကိရိယာ Smudge ပန်းရောင် Makrup Brush လက်ကား
◆ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်။①ပထမအဆင့် အရည်အသွေး၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်း။MURAN ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်အစုံသည် စျေးနှုန်းသက်သာသော ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အရည်အသွေးကိုပေးဆောင်ပါသည်။②LUXURIOUS AND PLUSH BRISTLES.အရေပြားယားယံခြင်းမဟုတ်သော၊ ကျွတ်ထွက်ခြင်းမရှိသော၊ အပြစ်အနာအဆာကင်းစင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
◆ပြောင်မြောက်သော Brush အစုံပါသော လှပသောထုပ်ပိုးမှု။မိတ်ကပ်ချစ်သူများအတွက် ခမ်းနားသောခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များ။
◆ ပရီမီယံ ပေါင်းစပ်ဆံပင်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အခမဲ့။MURAN မိတ်ကပ်စုတ်တံသည် တိရစ္ဆာန်တိုင်းကို ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
◆ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ် Brush များထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ မိတ်ကပ်နှင့် Brush set များကို ကောင်းစွာသိပြီး စတင်သူမှ စတူဒီယိုအလှပြင်အနုပညာရှင်များအထိ သင့်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
◆ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ကပ် Brush ကိုသင်မကျေနပ်ပါက 100% ငွေပြန်အမ်းမည်ဟုအာမခံပါသည်။ သင်၏ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။MURAN သည် သင့်အနားတွင် အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
10pcs သေးငယ်သော Eyeshadow Brush Set ချွန်ချွန် Round Head Makeup Brush Tool
1. Brand New နှင့် အရည်အသွေးမြင့်။
2. အထိအတွေ့အတွက် နူးညံ့ပြီး ပိုးဝင်သော စုတ်တံများသည် ထူထဲပြီး ပုံသဏ္ဍန်ကောင်းသည်။
3. 10pcs Kabuki Brush Set Synthetic Makeup Brush ဖောင်ဒေးရှင်း Eyeshadow Blush Concealer Powder Brushes များသည် စတင်အသုံးပြုသူများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
အမျိုးမျိုးသော ဘရက်ရှ်ငါးမျိုး (Angled, Round, Flat, Flat Angled, Tapered) သည် အခြေခံအလှကုန်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် လွယ်ကူပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ထောင့်ချိုးမိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ်သည် blush နှင့် bronzer အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။သေးငယ်သော စုတ်တံသည် အစင်းကြောင်းများနှင့် အစက်အပြောက်များအတွက် ဖြစ်သည်။
လက်ကား Professional 10 pcs Rose Gold Plastic Plating Handle Blush Make Up Brushes Girls Daily Makeup Brush Set with Case
မိတ်ကပ်စုတ်တံ အရေအတွက်- 10pcs/set
လက်ကိုင်ပစ္စည်း- နှင်းဆီရွှေရောင်လျှပ်စစ်ဖြင့် ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အရည်အသွေးမြင့် ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်
Tube ပစ္စည်း- ခိုင်ခံ့သော အလူမီနီယမ်ပြွန်
ဆံပင်ပစ္စည်း- အလွန်နူးညံ့ပြီး ပျော့ပျောင်းသော နိုင်လွန်ဆံပင်
ပုံမှန်အထုပ်- UP အိတ်၊
OEM ပက်ကေ့ဂျ်- ရနိုင်သည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပက်ကေ့ခ်ျကို လက်ခံပါ။
လက်ကား စိတ်ကြိုက် 5Pcs ပရီမီယံ ခရီးသွား အိတ်ဆောင် အသေးစား မိတ်ကပ် ဘရပ်ရှ် eye shadow Eyeliner Eyebrow lip make up brush set
100% အသစ်စက်စက် အရည်အသွေးမြင့်
ပွတ်တံအမွေးအမှင်ပစ္စည်း- ပေါင်းစပ်ဆံပင်၊ မြင်းပုဆံပင်
Brush ferrule ပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်
Brush လက်ကိုင်ပစ္စည်း- ပလပ်စတစ်
Brush ဆလင်ဒါပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်
ဆံပင်အရှည်: 1.4 စင်တီမီတာ
ပြွန်အရှည်: 15 စင်တီမီတာ
အရေအတွက်: 5pcs / Set
အရောင်- ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အစိမ်းနုရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ရွှေရောင်
Leather Case ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 24pcs မိတ်ကပ်ဘရုများ အစုံပါသော Pro အလှကုန်မိတ်ကပ် Brush အစုံ
အရောင်: ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်၊ သစ်သားအရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ ကော်ဖီ
Brush အရှည် 7.9" ခန့်
အိတ်အရွယ်အစား 24*15.5*5cm (ခေါက်)
Brush Material: ဖိုက်ဘာဘတ်
Makeup Foundation Brush Powder BB Cream Brushes Loose Powder Brush Flat Kit အလှကုန် မိတ်ကပ် Brushes
ခိုင်ခံ့ပြီး အနည်းငယ်ဝိုင်းသော စုတ်တံ
ပျော့ပျောင်းသောဖိုက်ဘာသည် သင့်မိတ်ကပ်ကို ပိုမို သပ်ရပ်လှပစေသည်။
မိတ်ကပ် Blush/Loose Powder/Foundation အတွက် သုံးပါတယ်။
အမွေးအမှင်တွေ ကြွယ်ဝပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းဖြင့် စုတ်တံ 200,000 ခန့်။
စုတ်တံက ထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
1pcs ကြီးမားသော Powder Brush Gold Blush အလှကုန် မိတ်ကပ် Brushes ဖောင်ဒေးရှင်း အလှကုန် အလှပြင်ကိရိယာများ
အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဤ brush သည် အလွန်နူးညံ့ပြီး၊ အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး တာရှည်ခံကာ၊ လက်သည်းဖုန်မှုန့်များကို သန့်စင်ရန်၊ foundation brush၊ blush brush စသည်တို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1. အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အလွန်နူးညံ့ပြီး၊ အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်ပြီး တာရှည်ခံပါသည်။
2. လက်သည်းဖုန်မှုန့်များကို သန့်စင်ရန်၊ ဖောင်ဒေးရှင်း ဘရပ်ရှ်၊ blush brush စသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. လက်ရာမြောက်သော လက်ကိုင်ရှည်ဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိသော လက်ကို ပေးစွမ်းသည်။
4. မင်းရဲ့ မတူညီတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် စတိုင်5ခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
5. ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းပညာရှင်နှင့် စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။